Toyota ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Prius အသစ် နဲ့ ပက်သက်ပြီး သိထားသင့်သမျှ အချက်အလက်များ! – MyMedia Myanmar
Toyota ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Prius အသစ် နဲ့ ပက်သက်ပြီး သိထားသင့်သမျှ အချက်အလက်များ!
လက်ရှိ ၄ ခုမြောက် မျိုးဆက် အဖြစ် ထွက်ရှိ ထားတဲ့ Toyota Prius အမျိုးအစား ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တုန်းက စတင်ထွက်ရှိခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်း ကတော့ Facelift ဒီဇိုင်း အပြောင်းအလဲကို ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး နာမည်တစ်ခု ရပ်တည်လာ တာဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် ရှိလာတဲ့ ကားတစ်စီး အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ စံချိန် တစ်ချို့ ကျိုးပျက် ခဲ့ရတယ် လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး Mainstream မှာတင်ပဲ Hybrid အမျိုးအစားအဖြစ် ထွက်ရှိလာခဲ့လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ် ဆိုရင်လည်း ဒီ ကနေ့ခေတ် Hybrid ကားတွေ ဆိုတာ ကတော့ အရမ်းကြီး ထူးခြား သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ ကားတွေကတော့ ကုမ္ပဏီကနေ ဖန်တီး ထားတဲ့ Lineup တွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ Plug-In Hybrid နဲ့ ဘက်ထရီ လျှပ်စစ် သီးသန့်သုံးကားတွေ အဖြစ် အစားထိုးပွဲထွက် လာခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလို Trend မျိုးနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ကားလောက ထဲမှာတော့ အခု အသစ်ထွက်ပေါ်လာမယ့် ၅ ခုမြောက် မျိုးဆက်သစ် Prius မှာ ရော အခု လိုမျိုး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အဖြစ်ပြောင်းလဲ လာနိုင်တော့မလား ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာ ကောင်းသလို တကယ်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ကတော့ Prius မျိုးဆက်သစ်ကို ဖန်တီး နေတာ သေချာတယ်လို့ ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့ Mag-X ဘက်က အတည် ပြုထားခဲ့ ပါတယ်။
အခု အချိန်အထိတော့ အဆိုပါ ကားအသစ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မယ့် ရက်အတိအကျကိုလည်း မသိရှိ ရသေးသလို အဆိုပါ Prius ကို ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် ထဲမှာ ဘယ်လောက် အထိ ကြာမြင့် အောင် ဖန်တီးနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း သေချာမသိနိုင် သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အချို့ သော သတင်းတွေ ရဲ့ ခန့်မှန်း ဖော်ပြချက် တွေ အရတော့ အခု Prius အသစ် မှာ ဆိုရင် TNGA-C Platform အသစ် ပေါ်မှာ ပဲ ဖန်တီး ထုတ်လုပ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပြီး နည်းလမ်း ပေါင်းစုံနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှု တွေ ကို ပြုလုပ် ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့်တော့ အခု ၅ ခုမြောက် မျိုးဆက်သစ် Prius မှာ ဆိုရင် ဒီဇိုင်း ပိုင်း အရရော တည်ဆောက်ပုံအရပါ ယခင် မျိုးဆက် ထက် ပိုပြီး Aggressive ဖြစ်တဲ့ ပုံစံ ကို မြင်တွေ့လာရ ဖို့ ခန့်မှန်း ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင် တုန်းကတော့ Prius ဟာ ဘယ် တုန်းကမှ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကို မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်း မရှိတာကနေ အခုတစ်ခါမှာတော့ အဆိုပါ အစဉ်အလာ ဆိုးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ရှိနေခဲ့ ပါပြီ။
အခုလို ပြောင်းလဲ နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အခု အသစ်ထွက်ပေါ်ထားတဲ့ ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက် သစ် Toyota Mirai ကသက်သေပြလို့ နေပါတယ်။ သေချာ တဲ့ အချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ယခင်မျိုးဆက် အဟောင်းထက် Prius ထက် ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းလာမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံး တကယ် သိချင် နေကြမယ့် မေးခွန်း တစ်ရပ်ကတော့ အဆိုပါ မျိုးဆက်သစ် Prius မှာ အင်ဂျင်ပိုင်းအရ အလုံးစုံလျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံး ကား အဖြစ် ပွဲထွက်လာမှာလား ဆိုတာ ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ချေလည်း များ သလို PHEV Powertrain ကိုလည်း အဓိက ရွေးချယ် ရာ အဖြစ် ထားရှိပြီး လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ကိုလည်း အခြားသော ရွေးချယ်စရာ အဖြစ် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်း ဆိုရ‌ရင်တော့ Standard Hybrid Setup ကိုသာ ပိုပြီးဦးစား‌ပေးလာနိုင်တဲ့ သဘောပါပဲ။ တကယ်တမ်းသာ အခုလို အခင်း အကျင်းနဲ့ ကား အသစ်ကို ထုတ်လုပ် လာမယ် ဆိုရင် Prius အတွက် ပိုပြီး ရေရှည် ရပ် တည်နိုင်ဖို့ ကောင်းမွန်မယ့် ရွေးချယ် မှု ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အ ပြင် Toyota Prius ဟာ ဆိုရင်လည်း ဒေသတွင်းမှာ အဓိက ပြိုင်ဆိုင်မှု အားတစ်ရပ်အဖြစ် Corolla Hybrid နဲ့ လည်း ဈေးကွက်အတွင်း ယှဉ်တိုက်နေရတာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါ ကားဟာ လည်းတူညီတဲ့ Platform နဲ့ Hybrid စနစ် တို့ကိုအသုံး ပြုထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Toyota အနေနဲ့ အခုလို ပြိုင်ပွဲ မှာ အသာ ရနိုင်ပါ့မလား လို့ ဆိုနိုင် ပေမယ့် တကယ်တမ်း ဝန်ခံရမယ် ဆိုရင်တော့ Corolla Hybrid ဟာ ပိုပြီး ထူး ခြား ကောင်းမွန်တဲ့ All-Around ကား တစ်စီး အဖြစ်တော့ ရပ်တည်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Toyota ဆီကနေ မကြာသေးမီကပဲ ထူးခြားတဲ့ ဖန်တီးမှု တစ်ခုကို ကြိုတင် သိရှိထား ရပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ Tokyo Motor Show မှာ ပြသခဲ့တဲ့ Radical-Looking ပုံစံ Toyota LQ လျှပ်စစ်ကား Concept ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်း ပိုင်းကတော့ Bold ဖြစ်တာ ကို မြင်တွေ့ထားရပေမယ့်လည်း Level4အဆင့်ရှိ မောင်းသူမဲ့ စနစ် ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးလာနိုင်ကာ အလို အလျောက် ပါကင် ထိုးပေး နိုင်မယ့် စနစ် လည်း ထည့်သွင်း ပေးထားပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Toyota အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Prius နဲ့ ပက်သက် ပြီးဆက်လက် တိုးတက် ဖန်တီး နေတယ် ဆိုတာ သေချာတယ် ဆိုရင်တော့ အခု နှစ် နှောင်းပိုင်း လောက်မှာတင် လမ်းပေါ်စမ်း သပ် လာနိုင်မယ့် Prototype တစ်ချို့ကို မြင်တွေ့လာရဖို့ မျှော်လင့် ရပါတယ်။
The post Toyota ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Prius အသစ် နဲ့ ပက်သက်ပြီး သိထားသင့်သမျှ အချက်အလက်များ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-26T14:31:31+06:30January 26th, 2021|MYCARS MYANMAR|